Ubani amaBrahmins kwiSystem Caste System?
Imbali kunye neNkcubeko WaseMzantsi Asia
I-Brahmin ilungu le-caste ephezulu okanye i- varna eHindu. I-Brahmins yi-caste evela kuyo abafundisi bamaHindu, kwaye banembopheleleko yokufundisa nokugcina ulwazi olungcwele. Eminye i- castes enkulu , ukusuka phezulu ukuya ephantsi, yiKshatriya (amaqhawe kunye neenkosana), Vaisya (abalimi okanye abathengisi) kunye noShudra (abakhonzi kunye nabakwa-sharecroppers).
Okuthakazelisayo, i-Brahmins ibonisa kuphela kwingxelo yembali malunga nexesha lolawulo lobuGupta , elawulawula ukususela kwi-4 ukuya kwekhulu lesi-6 CE.
Oku akuthethi ukuba abazange babe khona ngaphambi kwelo xesha. Imibhalo ye-vedic yakuqala ayinikezeli ngokubanzi ngeengxelo zembali, kwimibuzo ebalulekileyo ebalulekileyo njengokuba "bangobani ababingeleli kule nkcubeko?" Kubonakala sengathi i-caste kunye nemisebenzi yayo yobubingeleli yenziwa ngokuthe ngcembe kwithuba, kwaye mhlawumbi yayisendaweni ethile ngaphambi kwexesha leGupta.
Inkqubo ye-caste ibonakala iguquguqukayo, ngokwemisebenzi efanelekileyo yeBrahmins, kunokuba umntu alindele. Iirekhodi ezivela kwixesha eliqhelekileyo kunye nexesha eliphakathi kwe-Indiya lithetha amadoda eklasi yaseBrahm eyenza umsebenzi ngaphandle kokusebenzisa imisebenzi yobubingeleli okanye ukufundisa ngenkolo. Ngokomzekelo, abanye babemagorha, abathengisi, abakhi bezakhiwo, abenzi beetapeti, kunye nabalimi.
Ekupheleni kokulawula kolawulo lweMaratha Dynasty, kwi-1600 ukuya kweye-1800 CE, amalungu e-Brahmin caste asebenza njengabalawuli bakaRhulumente kunye neenkokheli zemikhosi, imisebenzi eninzi ehambelana neKshatriya.
Kuyathakazelisa ukuba abalawuli baseMuslim baseMughal Dynasty (1526 - 1857) basebenzise amaBrahmins njengabacebisi namagosa karhulumente, njengoko kwenza iBritish Raj eIndiya (1857 - 1947). Enyanisweni, uJawaharlal Nehru, unkulumbuso wokuqala weIndiya, naye wayelungu le-caste yaseBrahmin.
I-Brahmin Caste namhlanje
Namhlanje, iiBrahmins ziquka malunga ne-5% yabantu bonke baseIndiya.
Ngokwesiko, amadoda aseBrahmins enza iinkonzo zobubingeleli, kodwa aphinde asebenze kwimisebenzi ehambelana ne-castes ephantsi. Enyanisweni, uphando lwentlalo yeentsapho zeBrah ekhulwini lama-20 lifumene ukuba ngaphantsi kwe-10% yabantu abadala baseBrahmins ngokwenene basebenza njengabafundisi okanye ngabafundisi beVedic.
Njengamaxesha adlulileyo, amaninzi aseBrahm awenza umsebenzi wabo ohambelana nemigangatho engaphantsi, kuquka ukulima, ukusika amatye, okanye ukusebenza kumashishini enkonzo. Kwezinye iimeko, loo msebenzi unqanda iBrahmin ngokubhekiselele ekusebenzeni imisebenzi yobubingeleli, nangona kunjalo. Ngokomzekelo, i-Brahmin eqala ukulima (kungekhona nje ngokuba ngumnini-mhlaba-mhlaba, kodwa ngokuqinisekileyo ukulima umhlaba ngokwakhe) unokubhekwa njengento engcolileyo, kwaye ingavunyelwa emva kokungena kubabingeleli.
Nangona kunjalo, umbutho wendabuko phakathi kwe-Brahmin caste kunye nemisebenzi yobubingeleli ihlala isomelele. I-Brahmins ifundela iicatshulwa zonqulo, ezifana neVedas kunye nePutanas, kwaye ifundisa amalungu kwezinye i-castes malunga neencwadi ezingcwele. Baye benza imithendeleko yeetempile, kwaye baqhubela kwimitshato kunye nezinye iziganeko ezibalulekileyo. Ngokwesiko, amaBrahmins asebenza njengabakhokeli bokomoya kunye nootitshala beKshatriya nabathetheli, beshumayela kubaphathi bezopolitiko nabasemkhosini malunga ne-dharma, kodwa namhlanje benza imikhosi yamaHindu kuzo zonke i-castes ezantsi.
Imisebenzi enqatshelwe kwi-Brahmins ngokweM anusmriti ibandakanya ukwenza izixhobo, ukubetha izilwanyana, ukuthengisa okanye ukuthengisa iintlanzi, ukuloba inyama kunye neminye imisebenzi echaphazelekayo nokufa. I-Brahmins yintlobo yemifuno, ngokuhambisana neenkolelo zamaHindu ekuzalweni kwakhona . Nangona kunjalo, abanye badla imveliso yobisi okanye intlanzi, ngokukodwa kwiintaba okanye kwintlango apho imveliso inqongophala khona. Imisebenzi emithandathu efanelekileyo, ikwahlula ukusuka phezulu ukuya kweyona ephantsi, ifundisa, i-studio ye-Vedas, inika imibingelelo yimihla ngemihla, inika imiyalelo kwabanye, inika izipho kunye nokwamkela izipho.
Ezinye iipellings: Brahman, Brahmana
Umzekelo: "Abanye abantu bakholelwa ukuba uBuddha ngokwakhe, uSiddharta Gautama , wayelungu lentsapho yaseBrahmin. Oku kunokuba yinyaniso; nokuba uyise wayenkosi, ngokuqhelekileyo ihambelana neKshatriya (iqhawe / inkosana) esikhundleni sayo."
Ubukhosi baseMauryan bekuyiNtloko yokuQala ukuLawula iNinzi yamaNdiya
Imbali yeNkosi yaseKhola yaseMelika
UkuKhanya kweNdlela kunye nokuHlola kweNdalo
Indlela Yokugqoka Njenge Skateboarder